अर्जुनको हँसाउने बानीले मलाइका फिदा ! - Kendrabindu Nepal Online News
अर्जुनको हँसाउने बानीले मलाइका फिदा !
मलाइका अरोरा र अर्जुन कपूर अहिले ‘हट टपिक’ बनेका छन् । दुवैले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
उनीहरु लामोसमयदेखि छुकीछिपी एकअर्कालाई डेट गरिरहेका थिए । हालै उनीहरु छुट्टि मनाउन न्युयोर्क पुगेका थिए । मलाइकाले न्युयोर्कको एक तस्बिर सेयर गर्दै औपचारिक रुपमा दुवै प्रेमसम्बन्धमा रहेको खुलासा गरेकी हुन् ।
अहिले दुवैजना जोडतोडसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्धको प्रमोसनमा लागेका छन् । सायद प्रेम गरेपछि किन डराउनु ? भनेर हुन सक्छ, उनीहरु अहिले जहितही सँगै देखिन थालेका छन् । उनीहरु कहिले रेष्टुरेन्ट, कहिले फिल्म हल, कहिले एयरपोर्टका तस्बिरहरु भाइरल भइरहेका छन् । दैनिक उनीहरुको नयाँ नयाँ तस्बिरहरु आइरहेका छन् ।
प्रेमसम्बन्धको बारेमा बोल्न हिच्किचाउने उनीहरु अहिले खुलेर बोल्न थालेका छन् । दुवैले सोसल मिडियामा तस्बिरहरु सेयर गरिरहेका छन् । अर्जन कपूरले एक इन्टरभ्युमा बिहे बारे सोध्दा अहिले बिहेबारे नसोचेका र केहि समय प्रेमी प्रेमिकाकै रुपमा इन्जोय गर्न चाहने बताएका थिए ।
उता मलाइकालाई अर्जुनको कुन कुराले आकर्षित गरायो ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । उमेरले ११ बर्ष कान्छा अर्जुनको हँसाउने बानी सबैभन्दा राम्रो लाग्ने बताइन् । उनी अर्जुनको यहि बानीले फिदा भएकी हुन् ।
साथै अजुर्नले उनलाई राम्रोसँग बुझ्ने भएकोले आकर्षित भएको बताइन् ।